अलविदा कृष्ण सर – Palpa Samachar
By Samacharpalpa	 Last updated Aug 7, 2021
कतिपय मानिसका मृत्युले वास्तवमा समाजका लागि अपुरणीय क्षति पु¥याउँछन् । अहिले पाल्पामा यस्तै भएको छ । तानसेनको सेन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर मल्लको उपचारका क्रममा यही साउन २२ गते साँझ मृत्यु भएको छ । उहाँमा कोरोना भाइरस संक्रमणपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको र पाँच दिनको जिल्ला अस्पताल, तानसेनको उपचारपछि थप उपचारका लागि मेडिसिटी अस्पताल, काठमाडौंमा लगिएको थियो । निरन्तर अक्सिजन दिनुपरेका मल्लको आइ. सि. यु. र भेन्टिलेटरमा उपचार भैरहेको थियो । दूर्भाग्य उहाँ बाँच्नु भएन । सानो उमरमै आमा गुमाउनु भएका कृष्ण सरको बुवा दुई वर्ष अगाडि बित्नु भएको थियो । भर्खर ५२ वर्ष मात्र पुगेका कृष्ण सरको चितवनकि निर्मला ठकुरीसँग विवाह भएको थियो । उहाँहरूका दुई छोराहरू छन् क्रमशः १० वर्ष र सात महिनाको । यसरी निर्मला म्याडम र छोराहरूमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ । दैव यति धेरै निष्ठुरी किन बनेको हो ? त्यो सात महिनाको बालकले बुवालाई चिन्न पनि पाएन । कृष्ण सरको माया ममताबाट बञ्चित हुनुको पीडा एकातिर छ तर निर्मला म्याडमले दुई छोराहरूको पालन पोषण, शिक्षा आदिको जिम्मेवारी एक्लै बहन गर्नुपर्ने भएको छ । उहाँमा यसका लागि साहस, हिम्मत र धैर्यताको कामना गर्दछु ।
स्वः कृष्ण बहादुर मल्ल
नाबालक अबोध बालक छोराहरू आमाको माया ममता र सन्देशको कदर गर्दै बाबुको पदचाप पछ्याउन पक्कै सफल हुनेछन् भन्ने कामना गर्दछु । परीवारले श्रीमान्, बाबु, दाजु आदि साइनो अनुसारको सदस्यगुमाएको छ । हामी साथीभाइले सँधै हँसीलो, उज्यालो, खिस्स हास्ने, बकबक कहिल्यै नगर्ने, बौद्धिक तार्किक बोलीको धनी असल मित्र गुमाएका छौं । शायद केही दिनसम्म साथीहरूले पनि परीवारले जस्तै पीडा महसूस गर्नेछन् तर म्याडम र साना छोराहरूलाई हुने आजीवन पीडाको अनुभूति र त्यसको गहिराई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिंदैन । मैले कृष्णबहादुर मल्लको मृत्युलाई प्राज्ञिक क्षतिका रूपमा लिएको छु ।
पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखरामा शिक्षण गरिरहनु भएका कृष्णले शिक्षक सेवा आयोगमा माध्यमिक तहमा नाम निकालेपछि पाल्पाको वेद मा. वि. बराङ्दीमा नियुक्ति लिई शिक्षण गर्नुभयो । पछि तानसेनको सेन मा. वि. मा सरुवा भै शिक्षण गर्दै २०७४ पुस ५ गतेदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । स्वर्गीय कृष्ण बहादुर मल्लसँग मेरो सम्पर्क उहाँ सेन मा. वि. मा आइसकेपछि अलि बढ्यो । उहाँलाई मैले शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षणका लागि अनुरोध गर्दथें । उहाँ केन्द्रको अंग्रेजी विषयको रोष्टर प्रशिक्षक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विद्यालयमा मध्यान्तर सम्म कक्षा सकाएर अन्तिम सत्र सञ्चालनका लागि तालिम केन्द्रमा आउनुहुन्थ्यो । अर्थात् विद्यालयको पढाइ नबिगारी कन तालिम केन्द्रलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । एकताका तालिमका सहभागिहरूलाई आधा घण्टाको मध्यान्तर दिई खाजाका लागि छाडिन्थ्यो । केन्द्रमा खाजा खुवाउने व्यवस्था थिएन ।
दिउसो २ः३० बजे खाजा पछिको सत्र कृष्णजीले सञ्चालन गर्ने सल्लाह गरिएको थियो । उहाँ २ः३० पहिल्यै तालिम कक्षमा जानु भयो र २ः३५ सम्म बस्नु भयो । सहभागि नदेखेपछि उहाँ त्यतैबाट विद्यालय जानु भयो । सहभागिहरू पछि आउनु भयो । प्रशिक्षक नभएको हल्ला चल्यो । मैले सत्र सञ्चालन गरें । वास्तविकता त सहभागि ढीलो गरेको कारणले उहाँ हिड्नु भएछ । यस घटनाले मलाई समय पालनाका लागि कृष्णजी अब्बल भएको र हामी सबैले समय पालनालाई ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकायो । हामी तालिम सत्रपछि समीक्षा पनि गर्छौं । उहाँ सहभागि भएर पनि आउनु हुन्थ्यो । मेले उहाँसँग मेरो भाषा, क्रियाकलाप, गति, सहभागि सँगका व्यवहारकाबारेमा टिप्पणी माग्थें । मैले बोल्ने क्रममा“डिस्कस अबाउट”भन्दोरहेंछु । कृष्णजीले ख्याल गर्नु भएको रहेछ । यो अभिव्यक्ति अंग्रेजी व्याकरणका हिसाबले गलत हो । कृष्णजीले यो गल्ती औंल्याइ दिनु भयो । म आजकल यस्ता गल्ती नहोउन् भनेर सचेत बन्छु । यसरी प्राज्ञिक सिकाइका लागि भरोसा योग्य मानिस अब बिछोड भएको छ । मैले हरेक तालिम सत्रमा कृष्णजीलाई सम्झिन्छु होला ।
नेपालमा अंग्रेजी भाषा शिक्षण गर्ने बाल शिक्षादेखि विश्व विद्यालय शिक्षाका शिक्षकहरूको संस्था नेल्टा छ । यसको पाल्पा शाखाको संस्थापक अध्यक्ष म स्वयम् थिएँ र कृष्ण सर कार्यसमिति सदस्यमा रहेर हामी लामो समयसम्म काम ग¥यौं । समितिमा रहेर हरेक बैठक र क्रियाकलापमा सहभागी हुने मात्रनभै समितिबाहिर रहेर पनि नेल्टाका हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी हुने गर्नुहुन्थ्यो । अंग्रेजी साहित्य, अ‍ैग्रेजीभाषा शिक्षण र भाषाविज्ञान गरी तीनओटा अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका कृष्णजीले राजनीति शास्त्रविषयमा समेत गरी चार ओटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको थियो ।
उहाँले मलाई सुनाउनु भएको थियो कि एकपटक पोखरामा निजी विद्यालयमा शिक्षण गर्न जानु भएछ । अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा अंग्रेजी शिक्षण गरिरहनु भएको बेला त्यस विद्यालयले विज्ञान गणित शिक्षण गर्न दिएछ । अनि उहाँले आइ एस्सी भर्ना भै उतीर्ण गर्नु भयो । उहाँको यस शिक्षाको उपयोग शैक्षिक तालिम केन्द्रमा ब्रिटिश काउन्सिलको सहयोगमा सञ्चालित अंग्रेजी माध्यममा शिक्षणसम्बन्धी तालिम कार्यक्रममा आधारभूत तहका शिक्षकहरूलाई विज्ञान र गणितका विषयवस्तु अंग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्न सिकाउनकालागि समेत काम लागेको थियो ।
सिक्नका लागि कहिल्यै पछि नहट्ने कृष्णजीले नेल्टा वा शैक्षिक तालिम केन्द्रका हरेक शिक्षण सिकाइ क्रममा अत्यन्त मेहनतका साथ काम गर्नुहुन्थ्यो । नेल्टा केन्द्रिय समिति र अमेरिकाको ओडब्लुएल मिलेर ११ हप्ते अनलाइन कोर्स जुलाई २०२१ मा सकिएको थियो । म पनि त्यस कोर्सको सहभागि थिएँ । कृष्णजीले हरेक कार्य समयमै सम्पन्न गर्नु हुन्थ्यो । प्राध्यापकहरू र अन्य सहभागिहरूले उहाँको निकै प्रशंसा गर्दथे । उहाँका टिप्पणी सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने, अर्थपूर्ण र प्राज्ञिक दृष्टिकोण सहितका हुन्थे । त्यस कार्यक्रमको प्रमाण–पत्रआइ सकेको छैन । उहाँले देख्न पाउनु हुने भएन । यसरी जीवनको अन्तिमसम्म पनि उहाँमा सिकाइ भोक थियो । यहाँ बल्ल तल्ल ब्याक लागेर थर्ड डिभिजनमा पास भएकाहरूले उहाँको यो मेहनतको गहिराइ बुझ्ने कुरै भएन । यस क्रममा सम्झना आउँछ कृष्णजी र मेरो अहिलेसम्म बढुवा भएको छैन । यहाँ कतिपय थर्ड डिभिजन ब्याकवालाहरू पनि बढुवा भैसके । उहाँ फस्ट डिभिजनवाला हो र मेरो पनि फस्ट र सेकेण्ड डिभिजन छ । हाम्रो बढुवा किन हुदैन, हँ गोपाल भन्दै हास्नु हुन्थ्यो । उहाँ र मलाई क्याम्पसमा जागिर खान लेखेको छैन । यस अर्थमा पनि कृष्णजी र मेरा केही समानता थिए । अब यसप्रकारका व्यथाका कुरा गरेर हास्ने दिन सकिए ।
कृष्णबहादुर मल्ल मेहनत गरेरै परिस्थितिलाई चिर्दै आएको व्यक्ति हो । उहाँ सानोमा पढाइ छाडिसकेको तर पाल्पा जिल्लाका पूर्व सभापति झपेन्द्र जि सि को उत्प्रेरणाबाट पुनः पढाइमा लागेको, विद्यालयका कतिपय कक्षा पढ्दै नपढी माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरेर पढेको स्वयम् कृष्णजीले बताउने गर्नु हुन्थ्यो । सोही कुराको सहमति जनाउँदै नेकपा एमाले नेता झपेन्द्र जि सि ले आफुले उत्प्रेरित गरेको र कृष्ण मल्ल सानैदेखि असल मान्छे भएको बताउनु हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षण गर्ने क्रममा असाध्यै मेहनत गर्ने, विद्यालय तथा विश्व विद्यालयका धेरै विद्यार्थीैलाई ट्युशन पढाएर उतीर्ण गर्न सहयोग गरेको हो । उहाँ असल शिक्षक मात्र नभएर प्रधानाध्यापक भैसकेपछि विद्यालयमा केही सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकेको र खासगरी विद्यार्थी संख्याका हिसाबले दयनीय बनेको विद्यालयको अवस्थामा बृद्धि गरी कक्षा ११ र १२ मा उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको शिक्षक भिमलाल बस्यालले बताउनु भयो ।
यसरी व्यक्तिगत मेहनत र लगनशीलताका साथै संस्थागत पुण्य कार्यमा लागिरहेकै बेला विश्व ब्यापि फैलिएको कोरोना भाइरसको निहुँ बनाएर भगवानले कृष्ण बहादुर मल्ललाई आफू सामु लैजानु भएको छ । यो समाजले तपाईंलाई एउटा खोप दिन पनि सकेन । शायद अव अलि विवेकशील समाजमा जन्मलिनु होला । मृत्यु अवश्यम्भावी छ । सबै मानिसले जन्मने र मर्ने क्रममा केही समय ढीलो चाडो मात्र हो । अब हाम्रो जति धेरै गुनासो भएपनि कृष्णजी नफर्कने गरी जानु भएको सत्य हो । तसर्थ अलविदा कृष्ण सर । हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।
एसइईको परीक्षाफल प्रकाशित, कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित
पत्रकार महासंघ पाल्पाले पत्रकारहरुको दुर्घटना बिमा गरिदिने